अन्ततः रन्जनाकि दिदी रुदै आइन मिडियामा,आमाले रुदै खोलिन भित्री गोप्य रहस्य,सत्य कुरा यस्तो पो रहेछ! (भिडियो हेर्नुहोस) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/अन्ततः रन्जनाकि दिदी रुदै आइन मिडियामा,आमाले रुदै खोलिन भित्री गोप्य रहस्य,सत्य कुरा यस्तो पो रहेछ! (भिडियो हेर्नुहोस)
धेरै सुखी परिवार थियो । आमा बाबुका मुटुका टुक्रा रबि थिए । रबिको सपना आमाबाबुलाई धेरै खुशी दिने अनि जीवन भर सुखै सुखमा राख्ने थियो । आमा बाबुकै खुशिका लागि उनले रन्जना मैनालीसंग बिबाह पनि गरे । मागी बिबाह गरेका रबिले श्रीमती रन्जनालाई माया गरिरहे । करिब छ महिनासम्म राम्रै चलेको उनिहरुको सम्बन्ध धेरैबेर टिक्न सकेन ।
रबिका परिवारले करिब पचास लाख सम्म खर्च गरेर बुहारीलाई अस्ट्रेलिया सम्म पठाएका थिए । सासू ससुराले रन्जनालाई छोरी बराबर मानेका थिए । कहिल्यै बुहारी सम्बोधन समेत नगरेका बुबाआमाले सधै बुहारीलाई खर्च पठाइरहे अस्ट्रेलिया । अहिले रबिको परिवारमा आशुको खोला नै बगेको छ । तेति धेरै दुख गरेर पढ्न पठाएकी बुहारिले अस्ट्रेलियामै आफू भुलिएर घर परिवार नै बिर्सिन । श्रीमान संग त कुरा झन कुरा नै हुन छोड्यो । करिब तीन बर्षसम्म अस्ट्रेलियामा पढेर बसेकी रन्जना श्रीमानलाई थाहै नदिइ आफ्नो दिदिको बिहेमा सुटुक्क आइन । श्रीमानले रन्जना आएको सुइको पाएपछी एअरपोर्टमा लिन पुगेर अंकमाल गर्न खोज्दा नसोचेको जवाफ आयो । त्यो जवाफमा थियो । “मलाई छोइस मात्रै भने पुलिस केस गरिदिन्छु” रबिका आँखाभरी आँसु आयो ।
केही बोल्न नसकी रबि पनि रन्जनाकै गाडिमा चढे । गाडिमा रन्जनाको फेरि अर्को शब्द थियो “मेरो माइत हेटौंडा जाने भए हिड तेरो घर त मर्दा नि जान्न” रबि झनै बिराश बने रन्जना बदलिएको देखेर एक्लै घर फर्के । घरमा बुबाआमाले बुहारी खै भन्दा रबिले पीडा लुकाएर ” बिहेपछि आउछिन रे भनेपछी धेरै खुशी भएका बुबाआमाको खुशी धेरै समय टिक्न सकेन । रन्जनाले बिहेमा रबिसंग नबोलेर फोटोसमेत खिच्न नमानेपछी आफ्नो धेरै नै अपमान भएपछी निराश हुँदै घर फर्केका रबिलाई पर्नु पिर पर्यो । अन्ततः सहन नसकेपछी बीस पिएर छटपटाएर रन्जना रन्जना भन्दै कराउन थालेपछीमात्र आमा बाबुले थाहा पाए ।
अस्पताल त पुर्याए तर अस्पताल उनको आवाज रन्जना मात्र गुन्जियो तर रन्जना छेउ समेत परिनन । छटपटाउदै रबिको शरीरले संसार छाड्यो । अहिले जताततै यहि बिषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । अन्ततः रन्जनाकि दिदी रुदै मिडियामा आएकी छिन । उनले सुरुदेखि अहिलेसम्मकै सम्पुर्ण नालिबेली बताउदा आँसु नै थाम्न सकिनन । संगै रहेकी आमाले पनि भावुक हुँदै खोलिन रन्जनाको गोप्य रहस्यको पर्दाफास । तलको भिडियोमा हेर्नुहोला तपाइको मन पनि रुनेछ । आमाका कुराले तपाइँको होस उड्नेछ